လနှင့် ဓမ္မသို့ တိုက်ရိုက် | ZAYYA
Zen is Pure Awareness →
သို့သော် ယင်း ဒွိဟများ ကို လှစ်ပြရင်း ဒွိသဘာဝ တို့ အလွန် ကို လွတ်မြောက် သွားရန် သာ ဦးတည်ပါသည်။ ဥပမာ ~ ဗောဓိဥာဏ် ရင့်သန်ရေး အလို့ငှာ ဖော်ပြသည့် ရင်းဇိုက်ဇန်ဂျိ ( လင်းချီ, ? – ၈၆၇ ) ၏ စကားတွင် ဤသို့ ပါရှိသည်။ ~
သကျမုနိနှင့် လမ်း၌ တွေ့လျင်
သတ်ပစ် ချေလော့ !
ဗောဓိဓမ္မနှင့် လမ်း၌ တွေ့လျှင်
သတ်ဖြတ် ပစ်လော့ !
သကျမုနိ နှင့် ဗောဓိဓမ္မ ဟူသော ဝေါဟာရတို့သည် ဆာတိုရီ ၏ အခြား အမည်နာမသာ ဖြစ်သည်။ ယင်း မြင့်မြတ်သော စကားစုများ ကိုပင် စွန့်ပယ် ပစ်ရန် ဖြစ်သည်။ စိတ် အတွေးသန္တာန် ၌ တွယ်ညိမှု ကွင်းဆက်ဟူ၍ မြူ တစ်စိုးတစိမျှ မထားရှိရန် ဖြစ် ပါသည် ။ နောက်ဆုံး ~ ဆာတိုရီ သည်လည်း ကွင်းဆက် တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်သည်။ သံကွင်းဆက်၊ ကြေးကွင်းဆက် ၊ ရွှေကွင်းဆက် စသည် မည်သည့် ကွင်းဆက် ဖြစ်နေပါစေ ~ ကွင်းဆက်သည် ကွင်းဆက် သာ ဖြစ်၏။ ရွှေကွပ်ခြင်း ကြောင့်လည်း တွယ်ညိနေဖို့ မဟုတ်ပေ။ လွတ်မြောက် သွားရန် သာ ဖြစ်သည်။
ဂူလှောင်အိမ်၊ သစ်သားလှောင်အိမ်၊ သံလှောင်အိမ်၊ ကြေးလှောင်အိမ် ၊ ရွှေလှောင်အိမ် ~ မည်သည့် လှောင်အိမ် ဖြစ်နေပါစေ ~ ယင်းလှောင်အိမ် မှ လွတ်မြောက်ခြင်း သက်သက် သည် သာ အစစ်အမှန် လိုလားအပ်သည့် တစ်ခုတည်းသော အရာ ဖြစ်သည်။ ဇင် ဆရာများသည် လက်ညှိုးထိုး ပြ၍ ဖြစ်စေ၊ စကား ဆန့်ကျင် ပြော၍ ဖြစ်စေ၊ သင်္ကေတ ပြု၍ ဖြစ်စေ မူလ အခြေခံ အရာကို ညွှန်ပြခြင်း သာ ဖြစ်သည်။
လက်ညှိုးကို သုံးသည် ~ လက်ညှိုးတွင် နိဂုံးမချုပ်။
စာကို သုံးသည် ~ စာတွင် နိဂုံးမချုပ်။
~ Zen Forest